मलाई सं’स्कारी श्रीमान् चा’हियो-मीना ढकाल,,,पूरा पढ्नुहोस! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
मलाई सं’स्कारी श्रीमान् चा’हियो-मीना ढकाल,,,पूरा पढ्नुहोस!
मीना ढकाल, उनको उमेर सायद ४५ को हाराहारीको हुँदो हो। तर उनको चुरीफुरी १६ वर्षे युवतीको भन्दा कम छैन। रमाइलो गर्ने उमेरले होइन, मनले हो, चाहनाले हो, रहरले हो भन्ने गतिलो उदाहरण हुन् उनी। सामाजिक स”ञ्जाल टिकटकमा उनका १२ हजारभन्दा बढी फलोअर छन् भने उनले बनाएका प्र”त्येक भिडिओहरू १५ हजारभन्दा बढीले लाइक गर्ने गरेका छन्।
युवा पुस्तामाझ निकै लोकप्रिय रहेको सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा उनका ती भिडिओहरू हेर्दा लाग्छ, उनी भर्खर जवान भएकी छन्, उनको लाउँलाउँ खाउँखाउँको उमेर भर्खरै आएको छ र ब”ल्ल रमाइलो गर्दै जिन्दगीको मज्जा लिइरहेकी छिन्। उनी अहिले सेलिब्रेटी भएकी छिन्। युट्युब च्यानलहरूमा उनका प्रशस्त भि”डियोहरू, अन्तर्वाताहरू हेर्न पाइन्छ।
उनी चर्चित भने आफ्ना पतिसँगको २२ वर्षे लामो वैवाहिक सम्बन्धविच्छेद गरेपछि बनिन्। यस अर्थमा उनी २२ वर्षसम्म गुम”नाम बसिन्। उनकै शब्दमा भन्दा स”म्बन्धविच्छेद भएको दिन उनका लागि स्वतन्त्रता दिवस हो। उनी हुन् चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेलकी पूर्वपत्नी। उनको श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद भएको वर्षदिन भन्दा बढी भइसकेको छ।
सम्बन्धविच्छेद हुनुको कारण उनका अनुसार गजुरेलले उनलाई ‘स्वतन्त्रता’ नदिनु नै मुख्य हो। खान, लाउन, हिँड्न, रमाइलो गर्न श्रीमानलाई खुसी बनाएर मात्र गर्नुपर्ने भएकाले आजित भएर बुढेसकालमा यस्तो नमिठो निर्णय लिएको उनले अन्तर्वाताहरूमा सुनाएकी छिन्। २२ वर्षसम्म आफ्ना रहरहरू द”बाएर श्रीमानको खुसीमा खुसी हुने प्रयत्न गरेकी उनी श्रीमानबाट अलग भएपछि झनै खुसी छन्।
श्रीमानसँग छुट्टिने भनी गरेको निर्णयमा आजसम्म कुनै पश्चाताप छैन उनलाई। मिना ढकालको प्रसंग जोडेर भन्न खोजेको यति मा”त्र हो, महिला होस्, पुरुष होस्, विवाहित होस् वा अविवाहित, १६, २०, २५ वा ४५ वर्षको होस् वा ७५ वर्षको,आजको युगमा सबैका लागि स्वतन्त्रता अति नै आ”वश्यक छ। कसैलाई कसैको बन्धनमा परेर बाँच्न किमार्थ राम्रो लाग्दैन।
आफ्नो वरिपरिको वातावरण, प’रिवेश अनुसारको स्वतन्त्रता सबैका लागि बराबरी मात्रामा हुनुपर्छ मिना ढकालका लागि, मेरा लागि अनि तपाईंका लागि। सायद मिना ढकालले त्यही स्वतन्त्रताको लागि यो उमेरमा आएर छोराछोरी ठूला भइसकेपछि पनि यस्तो अप्रिय निर्णय लिनुपर्यो। सेतो पाटि डटकम बाट ।
Previous भारत र चीनका से’नाबीच भएको झ’डपमा : ज्या’न गु’माउने भारतीय से’नाको सं’ख्या २० पुग्यो, सं’ख्या अझै ब’ढ्न सक्ने…हेर्नुहोस् ।
Next चीनसँग सी’मामा त’नाब बढेपछि भारतले बोलायो गोर्खा सै’निक…हेर्नुहोस् !
41 mins ago Mechi Mahakali